Fandikan-teny dia afaka manery ny fifamoivoizana ny toerana
Septambra 19, 2009 amin'ny tolotra 4 Comments
Efa nahazo vaovao (ary ny tsara sary) avy any Mike Jan avy iPhone mpiseho toerana.
Bash.ch fifamoivoizana nitsambikina rehefa hametraka sivana transposh
Transposh mikendry ny hahatonga ny toerana be ny fahazoan 'ny hafa, izay mandeha ho azy ahitana fikarohana. Izany kosa dia mamela ireo mpampiasa kokoa ny mahazo ny toerana sy hahita ny votoatiny (na dia tany am-boalohany dia ilay voasoratra ao ny fiteny ka tsy mahalala). Izany toerana dia toy ny ohatra tonga lafatra, voasoratra ao am-boalohany alemaina, rehefa lasa ny votoaty lehibe nadika (ary therefor kokoa azo) its reach skyrocketed 😉
Isika, dia manasa ny hafa mba hizara ny tantara eo amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratra ity, toy izany koa ianareo niaina fahombiazana? Na inona na inona? Inona no tsapanao no mbola tsy hita? Faly foana izahay hihaino.
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: IZAO